डिप्रेसनको मुख्य कारण : खराब सम्बन्ध ? | eKhabarSanjal
Home जीवनशैली डिप्रेसनको मुख्य कारण : खराब सम्बन्ध ?
डिप्रेसनको मुख्य कारण : खराब सम्बन्ध ?
सम्बन्धमा उदासीनता र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजको जीवनशैली यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
जुनसुकै सम्बन्ध पनि एउटा विश्वासमा बनाइन्छ, जब शंका वा दुराचार बीचमा आउँछ, यसले सम्बन्धलाई टुक्राटुक्रा पार्न समय लिँदैन । यस परिवर्तित युगमा जति सजिलै सम्बन्धहरू निर्माण हुन्छन्, त्यति नै चाँडो तिनीहरू टुक्रिन्छन् पनि । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धमा आउने फाटोले दम्पतीहरूमा डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ । आजकल धेरैजसो युवापुस्ता यस अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । सम्बन्धलाई सञ्चालन गर्न असमर्थ र गतिमा राख्न सक्षम नहुनु सम्बन्धविच्छेदको प्रमुख कारण हो ।
यस्तो अवस्थामा युवापुस्ता जोसम्बन्ध जोगाउनको लागि संघर्ष गर्दैछन् उनीहरुले यसबाट बच्नका लागि केही तरिकाहरू अपनाउन सक्छन् ।
सम्बन्ध उदासीनताको कारण
सम्बन्धमा उदासीनता र सम्बन्ध विच्छेदको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आजको जीवनशैली यसको प्रमुख कारण हुन सक्छ । यो किनभने आज धेरै मानिसहरू यति व्यस्त छन् कि तिनीहरू एक अर्कालाई समय दिन असमर्थ हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा बिस्तारै दम्पतीहरू बीचको दुरी बढ्न सक्छ । जसले अन्ततः सम्बन्धमा फाटो ल्याउन सक्छ । किनभने सफल सम्बन्धको लागि एक अर्कालाई उचित समय दिनु महत्वपूर्ण छ । यदि यो सम्भव छैन भने कमसेकम केही समयसँगै बिताउनुहोस् । यसले दम्पतीहरू बीच नकारात्मक भावनाहरू हटाउन मद्दत गर्छ । जोडीबीचको दुरी वा सम्बन्धबिच्छेदले जोकोहीलाई पनि एक्लो महसुस गराउनाका साथै यसले एकांकीपन वा डिप्रेसन पनि निम्त्याउन सकिन्छ ।
सम्बन्धमा डिप्रेसनको प्रभाव
डिप्रेसनले मान्छेको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्नेगर्छ । सम्बन्धमा उदासीनताको प्रभाव निम्नानुसारको हुन्छ ।
–सम्बन्धमा आएको उदासीनताले व्यक्तिगत स्वभावमा परिवर्तन ल्याउँछ ।
–सम्बन्धका कारण हुने डिप्रेसनले दुवै व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा भावनात्मक हिसाबले असुरक्षित महसुस हुने र कोही व्यक्तिमा तनाव, उदासीनता र एकांकीपनबाट पनि ग्रसित हुन्छन् ।
–केही व्यक्तिहरू यस्तो अवस्थालाई सामान्य मानेर सामना गर्छन् तर केहि मानिसहरूसँग पीडा वहन गर्ने क्षमता हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाँही यति तनाव हुन्छ कि यसले डिप्रेसनको अवस्था समेत सिर्जना गर्छ । एकै समयमा यसले तपाईंको अन्य शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ ।
–सम्बन्धमा हुने विफलता र सम्बन्धका कारण हुने उदासीनताले तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई समेत समस्या सिर्जना गराउँछ।
सम्बन्धका कारण हुने डिप्रेसनबाट बच्ने उपाय
यदि तपाईं वा तपाईं नजिकको कोही सम्बन्धका कारण उदासीनता वा तनावमा हुनुहुन्छ भने यसबाट सजिलोसँग बच्न पनि सक्नुहुनेछ यसबाट सजिलोसँग बच्न पनि सक्नुहुनेछ ।
–यदि दम्पतीका बीचमा समस्याहरू समाधान गरिएको छैन वा सो परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्न तपाईं असमर्थ हुनुहुन्छ भने नजिकको साथी, परिवार वा अन्य व्यक्तिसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ ।
–कुनै समस्या कहिल्यै ठूलो नबनाउनुहोस्, कुराकानी गरेर चीजहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । सम्बन्धमा संवाद हुनु महत्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंको सबै समस्याहरू समाधान गर्छ ।
–जब तपाईं सम्बन्धमा जोडिनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईंले आफ्नो अहंकार छोड्नुपर्छ । किनभने धेरै पटक सम्बन्धमा फाटो आउने कारण आफ्नो अहंकार नै बन्ने गर्छ ।
–तपाईंको व्यवहारलाई थोरै लचिलो बनाउन प्रयास गर्नुहोस् ।
–कुनै पनि सफल सम्बन्धमा सबै सम्बन्धहरूलाई महत्व दिन महत्वपूर्ण छ ।
साथै, यदि तपाईं सम्बन्धमा उदासीनताबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने तपाईंले साथीहरू बनाउने प्रयास गर्नुभयो र उनीहरूसँग आफ्नो खुशी र दुः ख बाँड्न सिक्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको तनाव कम हुनेछ ।
राम्रो र मीठो क्षणहरू सम्झनुहोस् जसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ । जस्तै, हाँसो ठट्टा वा साथीहरूसँगको अविस्मरणीय क्षण आदि ।
Previous articleमोटोपन घटाउने ? यस्तो छ तरिका ।
Next articleकिन हुन्छ मिर्गौला खराब ?
अपुग भएकाले ३० करोड दिन लागिएको होः मन्त्री ढकाल
नेपाललगायत नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारी
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक,वामदेव पनि सहभागी
बर्डफ्लु प्रकोप : नेपालमा सम्भावित जोखिम ??